ललिता निवासमा झण्डा गाड्न पुगेका विवेकशीलका १६ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवासमा झण्डा गाड्न पुगेका विवेकशील नेपाली पार्टीका १६ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सार्वजनिक जग्गालाई भूमाफियाहरूले नीजि जग्गाको रूपमा दर्ता गरेको विरोधमा विवेकशील नेपालीले बुधबार ललिता निवासको जग्गामा राष्ट्रिय झण्डा गाड्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
राप्रपाले धर्मनिरपेक्षताकाे ब्यानर र पाेष्टर जलाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार र बिहीबार देशव्यापी घरदैलो गर्दै बैशाख ६ गते धर्म निरपेक्षताको ब्यानर र पोष्टर जलाउने भएको छ । हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना लगायत २२ बुँदे माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिएको फागुन ७ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाई जनसंघर्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
स्थानीय सरकारलाई बलियाे बनाउन लागिपरेका छाैँ : मन्त्री बिष्ट
गलकोट । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले स्थानीय सरकारलाई थप बलियो बनाउन वर्तमान सरकार लागिपरेको बताएका छन् । बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिकाले आज बिहान आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले केन्द्रीय सरकारले चालेको आयोजना स्थानीयस्तरमा आउँदा प्रभावकारी नहुने परिपाटीको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताए ।
सरकारले शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित बनाएकाे छ : गृहमन्त्री थापा
हेटौँडा । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधान र राज्य विरोधी तथा विखण्डनकारी तत्वलाई वर्तमान सरकारले नियन्त्रण गर्दै शान्ति सुरक्षाको कार्यलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाएको बताएका छन् । गृहमन्त्रायद्वारा नं. ३ प्रदेशस्तरीय शान्ति सुरक्षा गोष्ठीको आज उद्घाटन कार्यक्रममा पत्रकारहरुसँग उहाँले विकास एवं समृृद्धिका लागि शान्ति सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक रहेको र त्यसतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
विचारका आधारमा साहित्यकारलाई गिरफ्तार नगर्न प्रलेसकाे आग्रह
काठमाडौँ । प्रगतिशील लेखक सङ्घले विचारकै आधारमा साहित्यकार तथा कलाकारलाई राज्यले गिरफ्तार गर्ने, हिरासतमा राख्ने र मुद्दा चलाउने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘हामी कुनै पनि प्रगतिशील स्रष्टालाई राज्य तहबाट हुने कुनै पनि तहको दमनकारी क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउनु नैतिक दायित्व ठान्दछौँ’, प्रलेसका अध्यक्ष डा. जीवेन्द्रदेव गिरी र महासचिव समिर सिंहद्वरा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारी कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको कार्यबोझ नै मूल्याङ्कन नगरी दरबन्दी सिर्जना गरेको पाइएको छ ।
चीनकाे सडक प्रयाेग गरेर नेपालकाे गरिबी हटाउछाैँ : प्रधानमन्त्री ओली
सुर्खेत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनका सडक प्रयोग गरेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म खाद्यान्न आपूर्तिमा सहजता ल्याउने बताएका छन् । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको टनेल बोरिङ मेशिनद्वारा निर्मित सुरुङको आज ‘ब्रेक थ्रु’ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग उत्तरी नाका सञ्चालनका लागि सम्झाैता कार्य अघि बढाइएकाे जानकारी दिए ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा महासचिव पाैडेल ठगिएकै हुन् : सञ्चारमन्त्री बाँस्काेटा
बुटवल । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बालुवाटारको ललित निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल ठगिएको कुरा दोहोर्‍याएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल, रुपन्देही र प्रेस सोसाइटी, रुपन्देहीको आयोजनामा आज रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले ललिता निवासको सरकारी जग्गा किनेर महासचिव पौडेल ठगिएको कुरा दोहोर्‍याए ।
एनसेल मुख्यालयमा बम विस्फाेट गराउने मुख्य याेजनाकार पक्राउ
काठमाडौं । नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालय नजिकै भएको बम विस्फोटमा संलग्न मुख्य योजनाकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बम विस्फोटको घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका जुम्लाका वीरबहादुर कठायतलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।